Angataho Aho ho tonga | Fondation des Choisis de Jésus
Angataho Aho ho tonga
1C_21: Anaka, angataho Aho ho tonga hanapaka ireo fatorana mampifikitra anao amin’izao tontolo izao sy amin’ireo zavatra rehetra ara-materialy. Tiako ho olona afaka tanteraka ianao ; hiaina ny maha olona afaka marina amin’ny maha zanak’Andriamanitra, izay fanirian’ny Ray tamin’ny fotoanan’ny fahariana. Mba ho lasa Fitiavana, dia tokony hiverina ahazo ny fahafahana tany ampiandohana ianao, ilay fahafahana lehibe ilain’ny rehetra. Tiako ianao ary iriko ho Ahy tanteraka.